Shaqaalaha Wakaalada Jibriga Laanteeda Jigjiga Oo 139,000 Ugu Deeqay Bulshadii Abaartu Saamaysay - Cakaara News
Shaqaalaha Wakaalada Jibriga Laanteeda Jigjiga Oo 139,000 Ugu Deeqay Bulshadii Abaartu Saamaysay
Jigjiga(cakaaranews)Sabti 27ka May 2017..Shaqaalaha wakaalada jibriga laanteeda jigjiga ayaa deeq lacageed oo dhan boqol sodon iyo sagaal kun, lix boqol iyo konton birr (139,650) birr ugu deeqay bulshadii abaartu saamaysay ee kunool qaarkamid ah gobolada deegaanka.
Hadaba, deeqdan lacageed ayaa waxaa warbaahinta deeganka uga waramay maareeye kuxigeenka wakaalada jibriyada laanteeda jigjiga mudane Dhamalaash toshome oo sheegay in deeqadan lacageed ay tahay mid ay uu talagaleen bulshadii abaartu saamaysay eek u dhaqan gobolada qaar islamarkaana ay shaqaalaha wakaaladu kazoo jareen mushaarkooda.
Dhankiisa gudoomiyaha gudiga abaaraha ee ganacsatada deegaanka mudane khadar macalin cali oo lagu wareejiyay lacagtan ayaa sheegay in lacag dhan 139650 birr ay kuwareejisay wakaalda jibriga laanteeda jigjiga islamarkaana ay ugu deeqeen bulshadii abaartu saamaysay ee deeegaanka. Wuxuna usoo jeediyay shaqaalaha iyo masuuliyiinta wakaalada mahad celin balaadhan sida wanaagsan ee wadinyada leh ee ay uga qaybqaateen taakulaynta buslhada deegaanka ee ay abaartu saamaysay.
Sikastaba ha ahaatee, deeqaha lagaadhsiinayo bulshada abaartu saamaysay ayaa ah kuwo isdaba joog ah iyadoo hada kahor deeqo farabadan oo kaladuwan ay dawalada iyo ganacsataduba gaadhsiiyeen bulshadaas.